Shiinaha DZ600 / 2S soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |INCHOI
Habkani waa badeecada caadiga ah ee shirkadu leedahay, kana samaysan dhamaan birta aan la taaban karin, adkaysi u leh bay'adaha adag, isticmaalka joogtada ah ee mudada dheer, iyo xasilooni sare.Hadda waa qaabka ugu horreeya ee gudaha.Waxay ku habboon tahay hilibka, badeecooyinka la shiiday, wax soo saarka biyaha, cuntada badda, khudaarta, iyo wax soo saarka beeraha, miraha la ilaaliyo, badarka, soy-ga, alaabta daawooyinka, qalabka korontada, iwm.
Baakadaha Vacuum waa in laga daadgureeyo bacda vacuum-ka, ka dibna la xidho si ay u sameeyaan shahaado go'an oo faaruq ah bacda, si alaabta baakadu ay u gaadhaan ujeedada dahaarka oksijiinta, cusub, qoyaanka, caarada, miridhka, xasharaadka, iyo wasakhowga. ka hortagga.Si wax ku ool ah u kordhiso cimrigeeda oo fududaysa kaydinta iyo gaadiidka.
Mashiinka baakadaha ee taxanaha ah waxaa si toos ah u soo bandhigaya habka vacuuming, shaabadeynta, qaboojinta iyo qiiqa, kaas oo loo isticmaalo baakadaha vacuum ee cuntada, dawooyinka, biyaha, kiimikooyinka iyo warshadaha elektiroonigga ah. sidoo kale daxalka iyo qoyaanka, ilaalinta tayada iyo cusubaanta alaabta wakhti dheer kaydinta.waxay leedahay awood sare oo sahlan in lagu shaqeeyo, qalab lagama maarmaan ah oo ku jira khadka diyaarinta cuntada iyo warshad kale.
Mashiinnada baakadaha faakuumka ee ay soo saartay shirkadeena waxay leeyihiin shaqada baakadaha faakuumka, oo ku habboon bacaha filimada isku dhafan ee caagga ah ee kala duwan ama bacaha filimaanta aluminiumka, digaag duban, dufan duban, hilibka lo'da iyo hilibka lo'da, hilibka dameeraha, sausage, ham iyo hilibka kale ee hilibka. iyo alaabta biyaha., Alaabooyinka pickles, alaabta soy, wax lagu daro kala duwan, khamiirka, quudinta, miraha la ilaaliyo, badarka, alaabta daawada, shaaha, biraha dhif ah, alaabta kiimikada, iwm. Baakadaha faakuumka.
Mashiinka baakadaha faakuumka, kaliya waxaad u baahan tahay inaad riixdo daboolka faakuumka oo dhammaystiran ka dib faakuumka, xidhida, qaboojinta iyo qiiqa marka la eego habka.
Baakadaha faakuumka ama walxaha gaaska faakuumka waxay ka hortagi karaan oksaydhka, caariyaysiga iyo kutaanku waxay cunaan aboorka, qoyaanka, muddada kaydinta alaabta ee la dheereeyey.
Qaabka No. DZ600/2S
Celceliska isticmaalka tamarta 2.2kw
Cabbirka qolka vacuum 700*610*130mm
Xakamaynta cabbirka waxtarka leh 600*10mm/2xabo
Nambarka kulayliyaha 2*2
Xawaaraha xirmada 120-200 jeer/saacaddii
Kala dheeraynta khadka xidhidhiyaha 490mm
hoos u dhigista waqtiga 1 ~ 99s
Waqtiga xidhitaanka kulaylka 0 ~ 9.9s
shahaado vacuum ≤200pa
inta badan qaabeynta
MAYA. Magaca Qalab Summada Hadallo
1 kor qolka 4mm SUS304 INCHOI xoog sare, lagu kalsoonaan karo
2 hoos shaqada madal 4mmSUS304 INCHOI shirka alxanka
3 saxan dambe SUS304 INCHOI
4 jirka ugu weyn SUS304 INCHOI
5 dhidibka ugu muhiimsan SUS304 INCHOI
6 usha isku xirka qaabeynta SUS304 INCHOI
7 salool xanbaarsan qaabeynta SUS304 INCHOI
MAYA. magac tiro sumadda hadallo
1 vacuum bamka 2 NAN TONG 20m³/h
3 xiriiriye 2 CHNT
4 Ilaalinta culayska kulaylka 1 CHNT
5 waqtiga gudbinta 3 CHNT
Hore: DZ600/2S mashiinnada baakadaha Vacuum la hagaajin karo
Xiga: DZ-1000 mashiinka baakadaha faakuumka joogtada ah
Mashiinka Baakaynta Fakium ee ugu Fiican
Mashiinka Baakaynta Fakinka Cuntada ee Ganacsiga
Dz 500 Mashiinka Baakadaha Vacuum